Iftiinka Pendant, Siraajada Saqafka, Nalka Miiska - Iftiinka Haus
Ku soo dhawow iftiinka Haus
Haus Lighting Xaddid doorashadaada aaminka ah.
Nalalka oo dhan waa la buuxiyaa ka dib markay sameeyaan kormeer buuxa iyo tijaabooyin leh warbixin cad oo QC ah si loo dammaanad qaado laambad kasta oo tayo sare leh oo deggan.
Kala duwanaanta Style
Waxyaabaha laydhka ayaa si ballaadhan loogu isticmaalaa hudheelada kala duwan, waaxaha, guryaha la deggan yahay, waxayna ku guuleysatay sumcad wanaagsan oo tayo sare leh iyo adeeg muddo dheer ah.
Alaab quruxsan oo wax ku ool ah oo aad ka xulan karto.
Jaranjarada Sare ee Jaranjarada Iftiinka iftiinka
Laydhka Dahabka Dahaarka HL60L10
Waxaan ku dadaaleynaa inaan noqono lamaanahaaga ganacsiga nalalka la isku halleyn karo ee leh nalka nalka quruxda badan, tayo sare leh iyo qiimaha la awoodi karo .Qiyaasta iyo qiimaha ayaa sii ahaanaya mudnaanta koowaad ee nalalka Haus!
Haus Lighting Limited waa soosaar firfircoon oo soo saare laydh ah, kaas oo keena xalka ugu fiican ee laydhka ee dhismooyinka ganacsiga iyo kuwa la deggan yahay. Waxaan la aasaasay sanadkii 2013 la warshad soo saaraha ka badan 1500 oo mitir murabac iyo 200 mitir laba jibbaaran carwada, oo ku yaal Shiinaha taariikhda magaalada Zhongshan.
Waxaan badanaa soo saareynaa nalka qurxinta ee kaladuwan, oo ay kujiraan nalka, laambada suunka, nalka, saqafka Siraaj, Siraaj derbiga, Laydhka miiska, Laydhka sagxadda iyo nalka mashruuca u qaabeynta oo leh ikhtiyaarro qalab kala duwan ah, sida birta, aluminium, birta aan lahayn, naxaasta, galaaska, marmar iyo in ka badan oo la heli karo.